Imininingwane Ephuthumayo: Ukuhlola Okuqagelwa Kwemeyili Eqondile | Martech Zone
Ngaphambi kokuya kwidijithali, ngangisebenza ephephandabeni futhi ngiqondisa izimboni zeposi. Ngenkathi iphephandaba lihlulekile ukwamukela noma ukuzivumelanisa nesikhathi ukugcina ukulawula kwabo kumabhajethi wokukhangisa, i-imeyili eqondile iyaqhubeka nokuqhuba imiphumela emangalisayo. Eqinisweni, ngingasho ukuthi imikhankaso eminingi yokumaketha eqondile eneposi eqondile ingathola ukunakwa okuningi - ukuqhekeza umsindo wedijithali. Iqiniso ngukuthi, ngenkathi ngithola amakhulukhulu ama-imeyili nezibhengezo ezingishaya nsuku zonke, ngithola izingcezu zeposi eziqondile ezimbalwa kakhulu… futhi ngizibuka zonke.
Njengakuma-mediums amaningi, noma kunjalo, i-imeyili eqondile idinga ukulinganisa nokusebenza okuqhubekayo. Ngokunikezwa kwezindleko zeposi, abathengisi abaningi baye badela kokuxhumana ngenxa yalesi sizathu futhi bathuthela kundlela yedijithali engenabungozi kangako. Kuyishwa… ngoba ukuthola amanye amathemba kufezwa kangcono ngokusebenzisa abanamadlozi bendabuko.
Kuthiwani uma ungahlola imikhankaso yakho eqondile yeposi ngaphandle kwaleyo ndleko?
I-Quad / Graphics yethule iplatifomu yokuhlola imeyili eqondile esebenzisa ama-analytics wokuqagela ukuze avivinye ubuciko namafomethi ngokushesha okukhulu ngaphandle kokuthumela ngeposi. Kuyabizwa Imininingwane esheshayo futhi ingahlola okuguquguqukayo kokuqukethwe okungafika ku-20 kudlula okukodwa. Isebenzisa i-persona matrix eyinkimbinkimbi ehlanganisa ukubalwa kwabantu kanye nezici ezingokomzwelo ukubikezela ukuthi yiziphi izinto ezishukumisela umuntu ukuthi enze okuthile.
Ngokwesilinganiso, i-Accelerated Insights isize abathengisi ukuletha:
Amaphesenti ayi-18 kuye kwangama-27 phakamisa ngamanani okuphendula
Kuyancipha imiphumela ezinsukwini ezingama-60 vs. unyaka owodwa kuya kwemibili wokuhlolwa kwendabuko
A Ukunciphisa amaphesenti angama-90 ezindlekweni zokuhlola
Konke lokhu kutholakala ngaphandle kokuthumela ucezu olulodwa lwemeyili ephathekayo. Ingxenyekazi, ebizwa nge-Accelerated Insights, iqinisekisa ukuthi izibikezelo zokuhlola zinembe ngamaphesenti angama-97 (+/- amaphesenti ama-3), okuqinisekisa ukuthi imiphumela yocwaningo izophinda ikhiqizwe ekuhlolweni okubukhoma. Ithimba lisebenzise futhi lahlola uhlelo ezimbonini eziningana:
Umshuwalense Kazwelonke Kazwelonke - I-Accelerated Insights ibikezele ukwanda kwamaphesenti angama-23 kwezinga lokuphendula, ukwanda kwangempela kube ngamaphesenti angama-25.
Telecom kaZwelonke - Kwehliswe isabelomali sayo sokuhlola ngamaphesenti angama-55 ngemuva kokuthi i-Accelerated Insights ibikezele ngokunembile ukuthi iziphi izinto ezithinte impendulo kakhulu
Umdayisi Wezicathulo Zesifunda Esikhethekile - ukukhushulwa kwamaphesenti angama-32 okuphumelele ukwedlula isisekelo senkampani i-KPI okungenani ngamaphesenti angama-200. Le nkampani yandise ukusetshenziswa kwe-Accelerated Insights persona matrix kuzo zonke iziteshi zokumaketha
I-National Life Insurance Firm - I-Accelerated Insights ibikezele ukukhushulwa ngamaphesenti ayi-18 kanti ukwanda kwangempela kube ngamaphesenti ayi-19
Tags: imininingwane esheshayomail ngqoukubikezela okuqondile kweposiukuhlolwa kweposi okuqondileukumaketha okuqondilei-analytics yokubikezelaimeyili eqondile yokubikezelaI-quad / i-Graphicsukuhlola imeyili eqondile
Inothi elivela emgwaqeni